Tsipy kanetibe: miantso vonjy ireo mpilalao rehetra | NewsMada
Tsipy kanetibe: miantso vonjy ireo mpilalao rehetra
Anisan’ireo taranja mitondra faisana vokatry ny fisian’ilay valanaretina covid 19 ny tsipy kanetibe malagasy. Mitaraina sy miantso vonjy amin’izao fotoana izao, ireo mpilalao izay efa sempotry ny tsy fisiana.
Nandritra ny fisian’ity fihibohana ity, tapi-dalan-kaleha ireo mpilalao tsipy kanetibe malagasy. Ao anatin’ny havizanana tanteraka izy ireo, noho ny tsy fisian’ny vola sy ny sakafo. Marihina fa saika mivelona amin’ny filalaovana tsipy ka­netibe avokoa mantsy ry zalahy. Noho ny tsy fisian’ny fifaninanana, hatramin’ny volana marsa no ho mankaty, tsy misy intsony ny vola miditra.
Ireo “patron” na mpiantoka ny ekipa na mpanohana ireo mpilalao, tsy nanome fanampiana azy ireo intsony. Araka izany, manao antso avo amin’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena sy ny fitondram-panjakana mihitsy ireo mpilalao mivelona amin’ity taranja tsipy kanetibe ity mba hijery izay azo atao amin’ny fanomezana tosika fameno, hiatrehany izao fotoan’ny fihibohana izao, satria mamelom-bady aman-janaka ry zareo.
Ankoatra izay, ahina ho taona fotsy ny taom-pilalaovana 2020, ho an’ity taranja tsipy kanetibe ity. Mety tsy ho tontosa intsony mantsy ireo fifaninanana isan-tokony, efa voalahatra tao amin’ny fandaharam-potoana. Efa hiditra amin’ny fotoam-pahavaratra rahateo ny eto Madagasikara, afaka telo volana.
Raha tsiahivina, mbola vao ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara no tontosa, ny 14 sy ny 15 marsa, lasa teo. Tokony hiditra tamin’ny fiadiana ny ho tompondaka ny federation sport boule malagasy (FSBM), ny 17 ka hatramin’ny 19 aprily lasa teo, saingy tsy azo notontosaina izany. Lalao izay tokony hanendrena ireo ekipa lehilahy olon-telo miaraka, hisolotena an’i Madagasikara eo amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany 2020.
Lalao hotanterahina any Soisa, ny 17 – 19 jolay 2020, saingy hahemotra amin’ny taona 2021.